HIM | Health in Myanmar » 2014 » June
(၂၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ တားဆီးရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ မန္တလေးတွင် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မှာ သုည ဒသမ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်မှာ သုည ဒသမ ၉၄ ရာခိုင် နှုန်း ရှိတာတွေ့ရတယ်။ ဦးတည်အုပ်စုတွေထဲက ပြည့်တန်ဆာ ၈ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ လိင်တူဆက်ဆံသူများ ၁ဝ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူ ၁၈ ဒသမ ၆ ရာ ခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။
Treatment as Prevention TasP asareligion
Two recent papers below raise issues about ‘Treatment as Prevention’. TasP is more ofareligion than an established and proven tool. The fact is that most sexually transmitted epidemics are declining because people have changed their behaviour and use condoms or both. Onlyafew are not declining. Jamie ++++++++++++++++++ Model shows potential for […]
STDs လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတချို့
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar2 comments | Tags: HIV, STD, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဆစ်ဖလစ် စောစောပိုင်း အဆင့်အတွက် ၂ဝ၁ဝ သုတေသနတခုမှာ Azithromycin 2-g ပါးစပ်ကနေ တခါတည်း ပေးတာဟာ ထိရောက်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တယ်။ လူနာမှာ HIV မရှိမှ ထိရောက်မယ်။ ၆ လနေရင် သွေးထဲ ပိုးကင်း၊ မကင်းစစ်တာ ဒီကုသနည်း ၂ ခု မကွာပါ။ Ceftriaxone ၁ဝ-၁၄ ရက်ပေးတာလဲ ဆစ်ဖလစ် အစောပိုင်းဖြစ်တာအတွက် ထိရောက်တာ တွေ့ရတယ်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, ပညာပေး, ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခင်
မြန်မာဆေးလောက အတွက် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ‘လူတိုင်းအတွက် ထိုးတဲ့ခေါင်းလောင်း’ နှင့် ‘AIDS အကြောင်း’၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ‘ကင် ဆာ’၊ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် ‘သက်ရှည်ကျန်း မာမြန်မာ့အစာ’၊ ‘ဆေးလိပ်အကြောင်း ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်’ နှင့် ‘ဆီးချိုလူနာ လမ်းညွှန်’၊ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် ‘မိုက်ခ ရိုဝေ့ဖ်နှင့် ဟင်းချက်နည်းများ’၊ ‘ရှေ့တန်းရောက် ကျန်းမာရေးပြဿနာ များ’၊ ‘ပျော်ရွှင်ကျန်းမာ ဘဝဆည်းဆာ’ နှင့် ‘Myanmar Handbook of Health Research Methods Tomorrow’s Doctors’၊ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် ‘အားလုံးအတွက် ပညာရေးနှင့် တိုင်း ပြုပြည်ပြုဆောင်းပါးများ’ အစရှိသည့် စာအုပ်များကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
A report on Myanmar
Interesting document … http://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/publication/poster/RMM_Country_Posters_18Nov13.pdf Page 143 hasacouple of howlers: A gamechanger is “increased Government commitment on health and HIV (increasing health expenditures from 0.9% of GDP to 5% by 2015)” isn’t going to happen. And “Treatment as prevention when coverage levels are sufficient to support” isn’t either. Page 144 hasanice incidence […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, ကွန်ဒုံး
We must do better now
Jason Eligh ‏@JasonEligh just tweeted: “On this World Drug Day let us highlight the unacceptable HIV & treatment services’ deficiencies for PWUD in Myanmar. We must do better. Now.” I agree. Now. Jamie
HIV and migration meeting report
With up toaquarter ofamillion Cambodian migrants having left Thailand recently and Myanmar migrants in Thailand wondering about their fate, it is timely to read this migration and HIV meeting report. http://aidsdatahub.org/Regional-CSO-Collaboration-on-HIV-AIDS-for-Mobile-Populations Don’t miss the graph on Cambodia on page 16. Incidence had halved, due to the action of Cambodian communities on […]
နို့သောက်ခြင်းက အမျိုးသားများတွင် ဆီးကြိတ် ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်တက်နိုင်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: နည်းလမ်း, ပညာပေး, အမျိုးသား
နို့သာက်ခြင်းသည် အရိုးများကို သန်မာ စေပြီး ကျန်းမာရေး အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေ နိုင်ကြောင်းလူအများ အနေနှင့် ကာလကြာရှည် ယုံကြည် နေခဲ့သော်လည်း သုတေသန ရလဒ် နှစ်ခုက နို့ကို စွဲမြဲစွာ သောက်နေ ခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများတွင် ဆီးကြိတ် ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်တက် လာစေကြောင်း ဖော်ထုတ် ခဲ့သည်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: STD, ကျန်းမာရေး အသိ, နည်းလမ်း
ဆီးကြိတ်ကင်ဆာသည် လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါတစ်မျိုးအဖြစ် သိပ္ပံပညာရှင်များက ယူဆလာခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ရောဂါပိုးမွှား ကူးစက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ကင်ဆာ အမျိုးအစား အနည်းငယ် ရှိသော်လည်း ယင်းတို့အနက် ဆီးကြိတ်ကင်ဆာကို ယခင်က ထည့်သွင်းမထားခဲ့ချေ။ သို့သော်လည်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ ကင်ဆာသုတေသန ဌာနမှ ပညာရှင်များက ယခုအခါ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာသည်လည်း လူအချင်းချင်း ကူးစက်နိုင်သည့် ကင်ဆာမျိုးနွယ် တစ်ခုအဖြစ် ယူဆသင့်သည့် အလားအလာမျိုး ရှိနေကြောင်း ယုံကြည်လာခဲ့သည်။